Pipelight, ndiyo inoshanda nzira yekushandisa Netflix paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo isu tese tichiziva kwazvo, Microsoft yakafunga kuvhura hwaro hwayo Silverlight chete yeWindows uye Mac OS X, ichisiya Linux kunze uye nekudaro ichikunyima iwe yekugona kushandisa Netflix, LOVEFilm uye mamwe masevhisi akafanana kumamirioni evashandisi vanoshandisa penguin distro.
Ehezve, gare gare takasangana neNetflix Desktop uye dambudziko rakagadziriswa zvishoma, kunyangwe zvisiri zvachose nekuti iri mhinduro inosanganisira kushandiswa kwewaini, uye isu tatoziva kuti mashandiro echishandiso ichi haana kufanana uye anosiyana zvinoenderana nerudzi rwe software yatiri kuda kushandisa. Asi kune imwezve nzira, inowedzera kushanda uye ine mashoma kutsamira, uye inonzi mwenje wepombi.
Icho chirongwa chinopa Silverlight rutsigiro paLinux mune iwo mabhurawuza ane Netscape Plugin API rutsigiro (NPAPI), pakati pazvo patinogona kutaura Firefox neMidori. Zvakare kuGoogle Chrome, kunyangwe kwenguva pfupi kubva kambani yeMountain View yatove kuzivisa kuti icharega kupa rutsigiro kwairi.
Pakati pezvinhu zvitsva izvo zvakaunzwa izvi vhezheni itsva yePipelight tinogona kutaura rutsigiro rweAdobe Flash, iyo mune ramangwana shanduro inobvumidza kushandiswa kwe DRM. Uye zvakare, izvozvi zvakare zvinokwanisika kutsanangura iyo Pipelight kuisirwa kune yega yega mushandisi weiyo system, pachinzvimbo chekuita iyo yakajairwa kuisirwa, uye mashandiro eiyo Hardware yekumhanyisa emulation yakagadziridzwa.
Isa Pipelight zviri nyore kwazvo uye mune ino peji isu tine tsananguro yekuzviita mune akati wandei eakakosha distros (Ubuntu, Debian, Arch Linux, yakavhurikaSUSE, Fedora kana kuumba kodhi yekodhi).
Mamwe mashoko - Maitiro ekuvandudza kubva kuLinux Mint Debian Edition kuenda kuDebian 7 Wheezy
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Pipelight, ndiyo inoshanda nzira yekushandisa Netflix paLinux